tool ကို Kit
ကားဂိုဒေါင် & Airpot
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Loader ကို
အိမ် piggy ဘဏ်
ပစ္စည်း: Wood က, အထပ်သား
မူလအစရာ: တရုတ် (ပြည်မကြီး),
ထုပ်ပိုး: အရောင် Box ကို
MOQ: 1000 အစုံ
Delivery: 45 ရက်
100% Eco-friendly ပစ္စည်း
Mookids ကစားစရာ Co. , ပထဝီ, ဆက်သွယ်ရေး၏သာလွန်သည့် Ningbo Chian, တွင်တည်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကလေးများကစားစရာများနှင့်ကလေးထုတ်ကုန်အတွက်အထူးပြု။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းများ, စျေးကွက်များကဲ့သို့အဆင်သင့်အချက်များဝေမျှ
ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ် www ။ mookidstoy .com နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်, စီးပွားရေးဆွေးနွေးရန်
2. လက်ခံထား OEM
5.Fast & စျေးပေါတဲ့ Delivery
အရည်အသွေး & Service ကို: it’d be our priority to provide our clients with great quality products and superior customer service.
လျင်မြန်စွာခဲအချိန်: ကျနော်တို့အမြန်ဆုံး turnaround ကြိမ်လုပ်နှင့်သင့်သတ်မှတ်ရက်သေချာစေရန်အလွန်ခက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံပါတယ်။
မယှဉ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းများ: ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သငျသညျကနေအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်စသည်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ၏နည်းလမ်းတွေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေကြိုးစားကြသည်။
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ဖို့အတှကျဝမျးသာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အာရုံစိုက်ပါ။ ကျနော်တို့အမေရိကန်ဈေးကွက်ဥရောပစျေးကွက်နှင့်အာဖရိကစျေးကွက်, ရုရှားစျေးကွက် servicing အတွက်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ ဦးဆောင်အဆသင်လိုအပ်သည့်တိကျသောပစ္စည်းများနှင့် item ကိုပမာဏအပေါ်မူတည်ကြောင်းသတိထားမိဖြစ်ခြင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကအမြဲတမ်းသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လမ်းကြောင်းသစ်၏နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။
ယခင်: Pull and Go Duck
နောက်တစ်ခု: Cutting Vegetable Set
Sanding ← Punching & Slotting ← Transection ← အရောင်တင် ← Thickness
Adress: ROOM တွင် 2806, Block ကိုတစ်ဦး, အမှတ် 933 Tiantong Norh Raoad, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 574 87628248